Umzekelo wabaTitshala iMigaqo-nkqubo yokuSebenza
Ootitshala Iimigaqo kunye nokulungiswa
Umzekelo wokuSebenzelana noMsebenzi oPhezulu kwaye Wenze Umgaqo wokuSebenza
Nantsi umzekelo womsebenzi wexesha elide kunye nomgaqo wokusebenza wokwenza umsebenzi ootitshala abaza kubanika abafundi nabazali ekuqaleni konyaka. Oku kwadalwa kusetyenziswa le nqaku, Indlela yokujongana noMsebenzi wexesha elide kunye noMsebenzi wokwenza .
Ukuqwalaselwa ngexesha, umsebenzi kufuneka ugqityiwe ekuqaleni kwexesha ngomhla omele.
Izabelo ezimfutshane zasekhaya ziza kufakwa "ngexesha" kuphela ekuqaleni kwexesha.
Ukuba sibheka iimpendulo kumsebenzi wesikolo sangasese sangaphambili, kufuneka ukopishe iimpendulo ngelixa sihlola umsebenzi wesikolo ukugcina njengendlela yokuphonononga, kodwa awuzukufumana ityala ngenxa yokuba wenze umsebenzi wesikolo. Ukuba umsebenzi wesikolo uqokelelwe ngaphandle kokuba iimpendulo zinikezelwe kwiklasi, ungayiphendula ngosuku olulandelayo kunye nesigwebo sexesha elifutshane. Umsebenzi wesikolo ongapheliyo awuvunywanga.
Izabelo ezininzi ezahlukileyo zingaphendulwa ngokukhawuleza kunye nesigwebo samabanga amabini ngosuku ngalunye. Abayi kwamkelwa emva komhla wesine. Ungeke usebenze emsebenzini wesikolo emva komsebenzi wosuku. Imizamo yokwenza njalo iya kubangela ukuba kubekho umsebenzi wokugqibela.
Kwimeko yokuxolelwa ngaphandle , unentsuku ezimbini ezongezelelweyo ngenxa yokungabikho kokungabikho kokubala ngokungabalwa ngosuku lokubuya kwakho. Ekubeni isabelo sakho kuya kufuneka sitshintshelwe kwisabelo esifanayo ukuba izabelo ezibuyiselweyo zibuyiselwa ngaphambi kokuba zakho ziphendulwe, kufuneka undibuze ukuba ufuna ukufumana esinye isabelo ukuze ungabi nantoni ezimbini.
Umsebenzi ngenxa yomhla wokungabikho komntu ongenayo i-grade ine-grade.
Izabelo zexesha elide (izabelo ezenziwe ubuncinane kwiiveki ezimbini kwangaphambili) zifanelekile ngosuku lokubuya kwakho ekungabikho kokungabikho. Ukuba usesikolweni kodwa uxolelwe kule klasi, kufuneka uguqule izabelo ezide eziphakathi kweeklasi okanye ekuqaleni kwesidlo sasemini ukuze ukhuphe ukugwetywa.
Ukulawula Ukuziphatha kwabafundi
Izindlela zokusebenzisana nabafundi baseTardy
Ukukhethwa Kukhuthaza Abafundi Xa Imivuzo nejeziso Musa ukusebenza
Amacandelo okufundela ukuPhucula ukuLawula ukuziphatha
Iindlela ezi-7 zokuLawula iClassi yakho yokunciphisa ukuziphatha kakubi komfundi
Amanqanaba amahle kakhulu okusingatha umfundi ophazamisayo
'I-Gracias' kunye 'noGrace'
Iimpawu zeMasculine ezikhohlisayo ngesiJamani
Imvelaphi yokubhiyozelwa kwePasika
Ngaba I-Lent Yinde Kangakanani Ngomnyaka Wokunyuka?
Jonga Le Ngcaciso Yokuqala yeFixed Fiction Ngaphambi Kwalooxesha Ngomlobi Hughes
IMigaqo yeApeult Pole Vault
Indlela Yokunceda Umntwana Wakho Wongeza Umgama (eGoli)